Thatha iYelp kunye noVavanyo lukaGoogle kwiiNkqubo zakho eziSetyenziswa ngaBathengi bakho! | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 29, 2016 NgeCawa, ngoFebruwari 28, 2016 Douglas Karr
Kungekudala kakhulu sasinodliwanondlebe oluhle noDaniel Lemin, umbhali we IMANipuRATED: Abanini bamashishini banokulwa njani nenqanaba lobuqhetseba kwi-Intanethi kunye noPhononongo. Uthethe ngokubaluleka kokuthimba uphononongo ukwenzela ukuba uphonononge ngokutsha kunye nokulwa naziphi na iimpendulo ezimbi ezinokuvela ngamanye amaxesha.
Ngaba likho ixesha elingcono lokufaka uphononongo olukhulu kunokuba nje emva kokuba umthengi onelisekile eshiye ishishini lakho? Ngokunokwenzeka akunjalo-ke kutheni ungasebenzisi inkqubo eqhuba uphononongo ngakumbi kwaye uyenze ngokulula. Uphengululo lweMicimbi ithumela ikhonkco ngeSMS kumphathi wakho. Xa umxhasi evula iphepha lokufika, iphepha livelisa amakhonkco endalo yesicelo seselfowuni seYelp okanye isicelo seGoogle kwiFowuni yabo.
Kuba iiapps sele zingenile, oku kunciphisa inani lamanyathelo ekufuneka ehanjisiwe ukuhambisa umthengi kulonwabo ... ukuya kumaxwebhu! Ukuthimba lonke uphononongo oluchanekileyo kunefuthe kwishishini lakho, kungoko kutheni ungayibambi ngalo lonke ixesha? Oku kuhlala kuluncedo kuphononongo lwealgorithms ngokunjalo-ebeka ugxininiso kukuphononongwa kwakhona, hayi ubungakanani bazo.
Uphengululo olubaluleke kakhulu
Itekhnoloji enxibelelanisa nzulu yeselfowuni
Ukudityaniswa kweYELP yakho! kunye neeakhawunti zikaGoogle
Umdibaniso wazo zonke izimvo zakho kwiphepha elinye lewebhu kusasazo olongeziweyo
Inkqubo yokuphonononga i-imeyile
Ukubeka iinjongo okuqhubekayo kunye noqeqesho lweqela
Ishicilelwe Kit Starter
tags: uphononongo lweselula lukaGoogleUGoogle ishishini lamUphononongo lukaGoogleuphononongo lweselfowuniuphononongo olunomdlai-SMSUphengululo lwesmsumbhaloimiyalezo ebhaliweyoYelpuphononongo lwe-yelp